Filtrer les éléments par date : dimanche, 06 septembre 2020
Feno herintaona katroka androany 06 Septambra ny fitsidihana apostolika nataon’i Papa Ray Masina François teto Madagasikara. Naharitra hefarana izany.
Nanamarika ny fitsidihany teto ny fihaonany tamin’ny tanora sy ny Lamesa lehibe notarihan'i Papa teny Soamandrakizay ny 8 septambra 2019.
Somary gaga aho nilazana fa ao anaty lisitra ny anarako, dia nalaina tany amin'ny tompon'andraikitra ny ticket, dia hoe alaina eny Ankatso fanaovam-baolina ny entana.
Nanontany azy aho ny masotsivana anomezana ilay Vatsy Tsinjo, dia hoe izay rehetra manana karne dia mahazo avokoa.
Betsaka anefa ireo mitaraina fa tsy nahazo, ary ry zareo dia sahirana lavitra miohatra ahy, dia nomeko azy ireo ny ticket ko, dia mandehana alaivo any hoy aho, dia zarainareo mitovy ho anareo.
Tonga tany anefa dia niverim-potsiny, tsy nisy filazana, tsy nisy mpizara tonga teny an-toerana, heno fotsiny hoe lany ny entana ka miandry manaraka.
Niverim-potsiny ireo nangaina, nanantena ilay vary kely hifampizarana, ka dia nividianako vary nomena andreo, tazony ihany hoy aho ny ticket ka rehefa misy tonga dia alaivo.
dimanche, 06 septembre 2020 12:39
Vohilengo, Fénérive-Est: la circulation des biens est désormais ouverte
Pour la deuxième journée de sa tournée dans la Région Analanjirofo, le Président Andry Rajoelina s'est rendu dans la Commune de Vohilengo, Fénérive Est. La population locale peut désormais transborder les camions et les marchandises vers Fénérive-Est grâce au bac remis officiellement par le Président de la République ce 05 septembre 2020.
Cela fait maintenant 8 ans que la population locale rencontre des difficultés à évacuer leurs marchandises à cause de la défection de l'ancien bac.
Polisy, mpianadraharaha iray, miasa ao amin’ny Commissariat de Police Isotry no nitifitra ka nahafaty tovolahy sivily iray, izay namany niara-nikorana tamin’ny ihany. Voa teo amin’ny lohany ity farany.
Teny Isoraka-Antananarivo no niseho ny loza ny harivan'ny sabotsy 05 septambra 2020.
Nitolo-batana tany amin’ny lehibeny ilay Polisy taorian’izay. Notanana atao fanadihadiana ao amin’ny BC Anosy ilay nahavanon-doza.
Nanokatra fanadihadiana ihany koa ny IGPN (Inspection Générale de la Police Nationale) noho ny fahadisoana arak'asa nataon’ilay Polisy araka ny toromariky ny minisitry ny filaminam-bahoaka, ity farany izay manaiky mihitsy ny fisian'ny fifampiarovana sy ny tsikombakomba eo amin'ny Polisim-pirenena raha misy Polisy mahavita heloka, izay mila iadiana izany hoy izy.
Nalefa ao amin’ny tranompaty HJRA Anosy ny faty.
Miteraka resabe ny fizarana « Vatsy Tsinjo », na nampidirina an-tsehatra, nanadio ny lisitra hatramin’ireo minisitra sy mpiasan’ny ministera aza. Tsy eto an-drenivohitra sy ny manodidina ihany, fa na any amin’ny faritra aza dia andrenesana fimonomononana ary hatezeran’ny olona maro.
Ahodin'ireo olona ao amin’ny Fokontany sy mpikambana amin’ny Komity Loharano ny fanampiana amin’ny toerana sasany, ka vitsy amin’ireo marefo sy tena sahirana ara-pivelomana tokony hisitraka ilay « Vatsy Tsinjo » no nahazo.
Saika niafara tamin’ny fitsaram-bahoaka ny tranga tetsy Anosibe Angarangarana noho ny tranga toy io.
Ataon’ny sasany fitadiavam-bola ny karinem-pokontany amin’ny toerana sasany. Misy ireo ankohonana manana karinem-pokontany fa tsy hita amin’ny fotoana nilana azy ka tangosan’ny ao amin’ny Fokontany 10 000 Ariary.
Misy indray dia mpivarotra mpamongady no manangona ny vary « Vatsy Tsinjo » amin’ny sarety kely amin’ny vidiny 50 000 Ariary ny gony 50kg.
Na tsy mbola tafavoaka tanteraka amin’ny ady amin’ny Covid-19 aza i Madagasikara. Porofon’izany ny mbola nanitarana 15 andro indray ny Fahamehana ara-pahasalamana eto amin’ny tanin’ny Repoblikan’i Madagasikara.
Efa misy fivoarana makany amin’ny tsara kosa raha ny tarehimarika ofisialy avoakan’ny CCO, taterina isan’andro amin’ny haino aman-jery, mikasika ny fivoaran’ity valanaretina ity.
Nanana anjara biriky tamin’ny fahazoana izany vokatra izany ireo mpilatsaka an-tsitrapo nantsoin’ny fanjakana, hiara-misalahy sy nifarimbona amin’ny ady amin’ny Covid-19.
Nisy ny fampanantenana ny handraisana ho mpiasam-panjakana azy ireo. Miandrandra ny fanatanterahana izany ireo mpilatsaka an-tsitrapo ireo ankehitriny.
Mihamazo vahana ny asa ratsy, fanendahana olona eny amin’ny manodidina ny fiantsonan’ny fitateram-bahoaka mihazo an’i Mahitsy, eo Antohomadinika Antsalovana.
Mila ho isan’andro no ahenoana tranga.
Manao andiany ireo mpanendaka. Mitondra antsy lava ny sasany. Mitangorona amin’izay olona hendahany.
Miantso vonjeo ihany ny voahendaka fa tsy misy sahy mamonjy ny olona satria matahotra valifaty ataon’ireo mpanendaka.
Misy ny tratra fa tsy maharitra ela any Antanimora dia afaka, ary manohy ny asa ratsiny indray.
Tsy lavitra ny Poste de police Antaniavo sy ny Commissariat 67Ha ity toerana ity.
Manaitra ny tompon’andraikitra ny olona fa misy fantsona lehibe mitondra rano mivarina an-dranomasina mamoaka fofona maimbo eny amin’ny « Village touristique ». Simba ny torapasika, toy izany koa ny tontolo iainana.
Raha tsy voafehy io tranga io, hoy ny mponina, dia handao ity toeram-pitsangatsanganana iray amin’ireo mahasarika ny olona tonga eto Mahajanga ity ny olona, sy ireo mpanao vakansy sy mpizahatany tonga aty an-tanànan’ny voninkazo.
dimanche, 06 septembre 2020 08:57
06 septembre: Journée internationale de sensibilisation aux vautours
06 septembre: Journée internationale de sensibilisation aux vautours.
Araka ny fanapahana avy amin’ny Filohampirenena dia noraisina nandritra ny Filankevitry ny Minisitra natao ny 05 septambra 2020 ny didim-panjakana hanohizana ny hamehana ara-pahasalamana hoentina mandrindra ny ady amin’ny fiparitahan’ny valanaretina eto amin’ny tanin’ny Repoblikan’i Madagasikara.
Mipetraka eto amin’ny tanin’ny Repoblikan’i Madagasikara ny « Fahamehana ara-pahasalamana» manomboka ny 05 septambra 2020 ary mihatra avy hatrany.
Ireo fepetra rehetra sy ny andinidininy mikasika ny lamina sy ny fandrindrana rehetra hoentina miatrika ny 15 andro manaraka dia hohazavain’ny Filoham-pirenena mandritra ny fandaharana manokana hotanterahana anio alahady 06 septambra 2020 amin’ny 08 ora alina ao amin’ny Televizionina Malagasy.